Maxaa u sabab ah burburka Alshabaab? – Radio Muqdisho
Maxaa u sabab ah burburka Alshabaab?
Maleeshiyada Alshabaab waxaa muddooyinkii la soo dhaafay la soo gudboonaaday dhabar jab aad u xoog badan, ka dib markii laga qabsday inta badan dhulkii ay xoogga ku haysatay.
Sidoo kale waxaa la khaarijiyay hoggaamiyeyaashii kooxda oo uu ugu weynaa Axmed Godane.
Toddobaadkii hore waxaa duqeyn diyaaradeed lagu dilay Yuusuf Dheeg oo kooxda u qaabilsanaa sirdoonka iyo weerarrad dibadda, waxaa ka soo horreeyay Tahaliil oo ahaa madaxa sirdoonka kooxda.
Qaar ka mid ah hoggaamiyayaashii Alshabaab ayaa ka soo goostay oo isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya,iyagoo caddeeyay in ay rag gaar ahi ay kooxda ku gaaraan danahooda gaarka ayna ka been sheegayaan diinta Islaamka ee ay dhallinyarada ku dagaal gelinayaan.
Haddaba maxaa u sabab ah burburka kooxda soo wajahay, Maxaase la gudboon dhallinyarada kooxda u dagaallama ee la marin habaabiyay?
Waa mowduuca caawa ee barnaamijka Tubta Toosan, oo ay igala qeyb galayaan Generaal Cabdifitaax Caamir oo ka tirsan Wasaaradda Amniga Qaranka Soomaaliya iyo Sheikh Cali Maxamuud Shekh Cali Dheere
Marwada Madaxweynaha Sahra Cumar oo ka tacsiyeysay geeridii ku timid Raysul Wasaaraha Hooyadiis.SAWIRRO